Kukokera - Wikipedia
Kukokera (Directing) kupa hutungamiri nekutara gwara rinofanirwa kuteverwa uye kuwanisa midziyo nezvose zvinodikanwa nebamba rezuvanezuva kuti zvinangwa zvekambani kana sangano zvibudirire. Vanhu vanoronga nokupangidza gwara rinofanirwa kuteverwa nekambani kana sangano vanonzi vakokeri, pahushoma onzi mukokeri.
Shoko rokuti bamba (effort kuChirungu) rinoreva kubata kana kushanda kwose kunoitwa kuti nechinangwa chokuti donzvo rezvirongwa zvesangano zvizadziswe.
Muchengeti, murindi, mutariri kana mukumbudzi (steward).
Vakokeri veSangano[chinja | edit source]
Dare reVakokeri - (Board of Directors) idare rinotungamira sangano, rinotema mitemo mikuru inopa sangano iri gwara rokutevera uye kuburitsa pachena donzvo, nevavariro yesangano.
Mukokeri wekunze (Non-executive director) anenge ari nhengo yeDare reVakokeri asi asiri mukokeri mushandi.
Mukokeri Mukuru (Managing Director or Chief Executive Officer)' anenge ari mushandi wesangano uye ari nhengo yeDare reVakokeri aine basa rokutungamira mabasa esangano zuvanezuva. Mukokeri Mukuru anoshanda ari pasi peDare reVakokeri achipanga mazano mudare iri.
Mukokeri Muzvinabamba (Chief Operating Officer or Operations Director) anenge ari mukokeri uye mushandi weSangano anotungamira mabasa esangano mazuva ose. Mutungamiri weMushaninga anoshanda ari pasi peMukokeri Mukukuru.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kukokera&oldid=47090"
This page was last edited on 1 Gumiguru 2016, at 21:47.